Digital Marketing Executive at Treasure Star Gems & Jewellery Co.,Ltd
Treasure Star Gems & Jewellery သည် 1993 ခုနှစ် မှ စတင်၍ Moe Jewellery အမည်ဖြင့် Jewel Palace နှင့် FMI Shopping Centre တို့တွင် ဖွင့်လှစ်ရောင်းချပြီး၊ 1998 ခုနှစ်တွင် Treasure Star Gems & Jewellery Co., Ltd. ကိုစတင်တည်ထောင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင်သောလုပ်ငန်းတခုဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အရည်အသွေးပြည့်ဝကောင်းမွန်သော ကျောက်မျက်ရတနာများအား ပြည်တွင်းပြည်ပ ရှိဝယ်သူများ ၀ယ်ယူလိုပါက ၀န်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ Treasure Star ကုမ္ပဏီသည် ကျောက်မျက် တနာများကို ရောင်းချရုံသာမက ၊ ခေတ်မှီလှပသော ဒီဇိုင်းလက်ရာများကို လက်လီ၊ လက်ကားဈေးကွက်တွင် ထုတ်လုပ် ဖြန့်ချီရောင်းချနေသော ကုမ္ပဏီတခုအဖြစ်လည်း နာမည်ကျော်ကြား လူသိများ ပါသည်။
ယနေ့ခေတ် Treasure Star ကုမ္ပဏီသည် အရည်အချင်းပြည့်ဝ၍ ကျွမ်းကျင်သော စက်မှုလက်မှု ပညာရှင်များသာမက ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ၀န်ထမ်းများ၊ စည်းစနစ်ကျသော အုပ်ချုပ်မှုစနစ်များဖြင့် ကုမ္ပဏီ၏ ရည်ရွယ်ချက် ၊ ရည်မှန်းချက်များ ပြည့်ဝစေရန် ကြိုးစားအကောင်အထည်ဖော်လျှက်ရှိပါသည်။ လုံခြုံစိတ်ချပြီး စည်းစနစ်ကျသော ဌာနများလက်အောက်တွင် အရည်အသွေးမှီ လက်ဝတ်ရတနာများအား ခေတ်မှီဆန်းပြားသောစက်များ၊ နည်းလမ်းများနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများ အား သေချာစွာလုပ်ဆောင်လျှက်ရှိပါသည်။
Treasure Star Gems & Jewellery Co.,Ltd သည် လက်ဝတ်ရတနာများနှင့် ၀န်ဆောင်မှုများကို ၀ယ်သူများအတွက် သာလွန်ကောင်းမွန် သာ စံတခုထား ၍ အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိစေရန် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်လျှက်ရှိပါသည်။
Values! ရည်ရွယ်ချက် ရည်မှန်းချက် နှင့် တန်ဖိုးစံသတ်မှတ်ချက်များ
Treasure Star Gems & Jewellery Co.,Ltd သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အောင်မြင်ကျော်ကြားသော ကုမ္ပဏီတခုဖြစ်ရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ ကမ္ဘာစံချိန်စံညွှန်း အသိအမှတ်ပြု အမှတ်တံဆိပ်တခုဖြစ်ရန် အစဉ်အမြဲ ကြိုးစားလျှက်ရှိ ရုံသာမက ကျောက်မျက်ရတနာလောကတွင်လည်း
အောင်မြင်ကျော်ကြားသော ကုမ္ပဏီတခု အဖြစ် ရပ်တည်လျှက်ရှိပါသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ရည်ရွယ်ချက် ရည်မှန်းချက်တွင် တခုအပါအ၀င်ဖြစ်သော ၀ယ်သူများ၏စိတ်ကျေနပ်မှု ၊ အထူးကောင်းမွန်သော အဖိုးတန်ကျောက်မျက်ရတနာ များနှင့် ပြိုင်ဘက်ကင်း ခေတ်မှီဆန်းသစ်သော ဒီဇိုင်းများ ကို ၀ယ်သူများအတွက် စိတ်ကျေနပ်မှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချမှုတို့ ရရှိရန်လည်းဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ အဓိကတန်ဖိုးထားသောအရာများမှာ- ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ ဂုဏ်ကျက်သရေရှိခြင်း ၊ တီတွင်ဆန်းသစ်ခြင်း၊ နည်းပညာစနစ်ကျခြင်း၊ ၀န်ထမ်းစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် လူမှုအကျိုးပြုအဖွဲ့အစည်းတို့ဖြစ်ပါသည်။
Tamwe, Yangon 21 September 2019
Why are you leaving your current job?:
Assistant Manager (Marketing) AMTT Co.,Ltd
Yangon 22 September 2019
Sales & Marketing Staff Mandalay Golden Wing
Online Marketing MyJobs Search & Selection (Mandalay)
Mandalay 20 September 2019
Marketing MyJobs Search & Selection (Mandalay)
Products Design Executive Eastern Foundation Co., Ltd.
Digital Marketing Analyst Wall Street English
Marketing & Communication Manager iMyanmarHouse.com